सरकार लाटोबुंगोको अवतार जस्तै भएको छ : डा भट्टराई
मुख्य पृष्ठराजनीतिसरकार लाटोबुंगोको अवतार जस्तै भएको छ : डा भट्टराई
विराटनगर, २९ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सरकार कथाको लाटोबुंगोको अवतार जस्तै भएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा डा. भट्टराई जनताले माग गरेका कुरा नसुन्ने तर जनताले नगर्न भनेका कामचाहिँ गरेको भन्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङका पक्षमा व्यापक सार्वजनिक दबाब भए पनि नगरेको तर प्रतिनिधिसभामा हारेका वामदेव गौतमलाई चाँहि राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको भन्दै डा. भट्टराईले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, ‘कथामा लाटोबुंगोले जे गर्नु भन्यो त्यो गर्दैनथ्यो र जे नगर्नु भन्यो त्यो गर्थ्यो ! ओली सरकार त्यसैको अवतार जस्तो छ । आम नागरिक र मिडियाले हारेकालाई राष्ट्रियसभामा नलैजाऊ भने, तिनलाई लाने भएछ । तर लोडसेडिङ अन्त्यलगायत राम्रो काम गरेका कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर भने त्योचाहिँ गरेनछ ! सेम !’